म्याकमा एप्पल द्वारा हस्ताक्षर नगरिएका अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने म म्याकबाट हुँ
तपाइँको म्याकमा हस्ताक्षर नगरिएका एप्पल अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने
त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन् र अधिक समय पाउनको लागि, एप्लिकेसनहरू जुन ओएस एक्सको साथ म्याकमा स्थापित हुन एप स्टोर मार्फत जानबाट जोगिदै छन्। विकास सीमितताहरू जुन एप्पलले तपाईंको स्टोरमा उपलब्ध हुन चाहन्छन् अनुप्रयोगहरूमा थप्दछ। अधिक र अधिक विकासकर्ताहरू बनाउँदै जो आफ्नो अनुप्रयोगहरू प्रस्ताव गर्न रुचाउँछन् सिधा तपाईंको वेब पृष्ठहरूबाट, म्याक अनुप्रयोग स्टोरको सट्टा.
मुख्य समस्या यी विकासकर्ताहरूले सामना गर्नुपर्दछ कि उनीहरूको दृश्यता एप्पल स्टोरमा हुन्छ तिनीहरूले यसलाई कुनै पनि अन्य तरिकाले प्राप्त गर्दैनन्। साथै, नेटिभ, एप्पलले अनुप्रयोगहरूको स्थापना रोक्दछ जुन म्याक अनुप्रयोग स्टोरबाट आउँदैन। भाग्यवस, तिनीहरू कुनै समस्या बिना स्थापित गर्न सकिन्छ।
प्रत्येक चोटि तपाईले वेब पृष्ठबाट एक अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहुन्छ, स्वचालित रूपमा प्रणालीले स्थापना रोक्दछ कि यो एप्पललाई ज्ञात विकासकर्ताद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छैन। यो एक तरीका हो हाम्रो कम्प्युटरलाई सँधै सुरक्षित राख्नुहोस् र हाम्रो म्याकलाई खराब अनुप्रयोगहरूबाट भर्नबाट रोक्नुहोस्। तर यदि हामीलाई थाहा छ कि अनुप्रयोग विश्वसनीय छ भनेर हामी जान्न सक्छौं, तिनीहरूलाई स्थापित गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नै पर्छ।
अज्ञात विकासकर्ताहरूबाट म्याकमा अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुहोस्
पहिले हामी प्रणाली प्राथमिकताहरूमा जान्छौं, माथिल्लो मेनूमा फेरी अवरूद्ध हुन्छ।
अर्को हामी जान्छौं सुरक्षा र गोपनीयता। अब हामी ट्याबमा क्लिक गर्नेछौं सामान्य.
यो ट्याबको दोस्रो खण्डमा, जहाँ यो देखा पर्छ बाट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिनुहोस्: हामीले छनौट गर्नै पर्दछ जहाँसुकै। यो गर्नका लागि, हामी पहिले स्क्रिनको तल बायाँमा अवस्थित प्याडलकमा क्लिक गर्नेछौं र हाम्रो पासवर्ड प्रविष्ट गर्दछौं।
ओएस एक्सले हामीलाई विकल्प जोखिमका बारे सूचित गर्दै सन्देश देखाउनेछ, क्लिक गर्नुहोस् कहिँबाट पनि अनुमति दिनुहोस् र हामी कन्फिगरेसनबाट बाहिर निस्कन्छौं।
यस क्षणबाट हामी अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न सक्दछौं कुनै पनि विकासकर्ता द्वारा बनाईएको हो जुन एप्पलले चिन्न सकेन.
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » तपाइँको म्याकमा हस्ताक्षर नगरिएका एप्पल अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने
Sonos एप्पल संग आफ्नो गठबन्धन को घोषणा